Shiinaha Eco-friendly Wood Composite Co-extrusion WPC Decking soosaarayaasha iyo alaableyda | Lihua
Qiimo:$ 4.88 / M
2.2m, 2.9m ama loo habeeyay
Park, Muuqaalka Muuqaalka, Barxadda Bannaanka
-Loox-wada-bixinta ama looxyada dusha ka daboolan waa looxyada jiilka labaad ee WPC. Waxaa loogu talagalay dabool kaas oo ku xidhan xudunta guddiga inta lagu jiro wax soo saarka. Process Hawsha wada-ka-bixidda waxay ku lug leedahay adeegsiga antioxidants, midabeeyeyaasha, iyo ka-hortagga UV si loo xirayo xudunta.
Board Lihua's guddiga iskudhafka ah wuxuu ku guuleystaa midab aan dhammaad lahayn oo midab leh, oo la barbardhigayaa oo kaliya alwaaxa dabiiciga ah, tiknoolajiyadan casriga ah iyo casriga waxay u oggolaaneysaa isku-dhafka midabka cajiibka ah, oo bixiya mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee looxyada isku dhafan.
Afar xarumood oo isku-dhafan oo isku-dhafan oo wax soo saar ah, waxaan hubin karnaa inaad bixiso waqtigaaga.Waxa kale oo aan ku siin karnaa xulasho dheeraad ah adiga.Waxaan geyn doonnaa badeecadaha nus dhammaadka ah meel gaar ah, markii daaweynta ka dib ay dhammaato, waxaan u geyn doonnaa looxyadan sida go'aankaaga.
Hore: Iska caabinta Cimilada Hawada Isugeynta WPC Hollow Decking
Xiga: Dibedda Isku-darka alwaaxda WPC Cladding
Q1: Intee ayey le'eg tahay shirkaddaadu? Waa maxay qiimaha wax soo saar sanadle ah?
S2: Waa maxay qalabka baaritaanka aad haysaa?
Q3: Waa maxay nidaamkaaga tayada?
Q4: Waa maxay wax soo saarkaaga wax soo saar? Sidee lagu gaadhay?
Q5: Muddo intee le'eg ayuu shaqeynayaa inta soo hartay ee alaabooyinka WPC?
S6: Waa maxay muddada lacag bixinta aad aqbali doonto?
S7: Isbarbar dhigga qoryaha, waa maxay faa'iidada ay leedahay wax soo saarka WPC?
S8: Waxyaabaha WPC ma u baahan yihiin rinjiyeyn? Midabkee ayaad bixin kartaa?
Qiimaha dekedda WPC
Qurxinta banaanka ee WPC
Isku darka Wood biyuhu Laba Color Co-extrusio ...
Qurxinta banaanka ee WPC, Qurxinta WPC, alwaax decking isku dhafan, Bannaanka WPC decking, Dabaqa WPC, Gogosha WPC,